VALANARETINA AO TOAMASINA : Olona roa no efa matin’ny pesta hatramin’izao
Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao ilay trangana pesta ao Toamasina. Ny alarobia 13 septambra, dia namory mpanao gazety ny sampandraharahan’ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana. 14 septembre 2017
Nitarika izany ny talem-paritry ny fahasalamana, Dr Rakotoarimanana Raymond. Niara-dia taminy ihany koa ny mpandrindra ny tetikasan’ny Oms Atsinanana Dr Lamina Arthur ary ny mpitsabo inspektera eo anivon’ny hopitaly kely Dr Patrick Zara. Raha tsy nanome isa an’ireo olona efa matina pesta ny talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny talata 12 septambra, dia namoaka izany kosa izy nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, ny andron’ny alarobia.
Fantatra ary fa roa hatreto no namoy ny ainy vokatry ny aretina pesta amin’ny avokavoka (peste pulmonaire) ao Toamasina tampon-tanàna. Ny iray tovolahy avy any Vohemar mianatra ao amin’ny Oniversiten’i Toamasina monina ao Mangarano. Ity farany izay nodimandry, ny sabotsy 2 septambra. Ny faharoa kosa dia raim-pianakaviana monina ao Salazamay nodimandry, ny alahady 3 septambra. Momba ilay raim-pianakaviana avy tany Ankazobe kosa, dia tao Moramanga izy no maty. Niainga avy tamin’ny fahafatesany ny fiparitahan’ny pesta tao Toamasina satria niray fiara taminy ireo olona roa hafa izay nodimandry ireo. Izy izay voalaza fa avy ao Antetezambaro saingy niasa tany Ankazobe Antananarivo. Nalefa tany Antetezambaro ny razana.
Izay nifanerasera tamin’ny marary ihany no tokony mihinana fanafody
Manoloana ny fitadiavan’ny olona ny Cotrim, izay fanafody fiarovana dia nitondra fanazavana momba izany ny sampandraharahan’ny fahasalamana Atsinanana. Notsipihin’izy ireo mazava fa izay olona nifanerasera mivantana tamin’ilay olona marary na matin’ny pesta ihany no tokony mihinana fanafody. Mahakasika io indrindra, dia olona 349 nifanerasera mivantana tamin’ireo olona matin’ny pesta no efa nozaraina fanafody maimaimpoana.
Efa nahazo izany ireo olona tao Antetezambaro izay nifanerasera mivantana tamin’ilay razana matin’ny pesta. Nahazo izany ihany koa ireo mpianatra sy mpampianatra nifanerasera tamin’ilay mpianatra nodimandry.
Dimy sisa no manaraka fitsaboana ao amin’ny Hopitaly
Voafehy ny pesta ao Toamasina. Io no nambaran’ny talem-paritry ny fahasalamana Atsinanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Olona dimy monja sisa no arahi-maso ao amin’ny Hopitaly Be ary efa tsy misy ahiana ny momba azy ireo. Netsehina nitety fokontany nanomboka ny talata lasa teo ireo mpiasan’ny fahasalamana ao Toamasina mitondra fanazavana amin’ny mponina eny anivon’ny fokontany momba ny aretina pesta.
Tafakatra 10 000 Ariary ny Cotrim
Fikoropahana tanteraka ny an’ny mponina tao Toamasina vantany vao naheno ny fisian’ny pesta. Ny talata 12 septambra tamin’ny 4 ora hariva, dia efa tapitra avokoa ny Cotrim rehetra tamin’ireo toeram-pivarotam-panafody. Vokatr’izany, dia nisy ny mpanararaotra. Nisy tamin’ny mpivarotra fanafody no nampiakatra ny vidiny ho 10 000 Ariary ny Cotrim 10 venty. Ny alarobia maraina kosa, dia nidina ho 6 000 Ariary izany noho ireo farmasia efa nahatonga.
Ny marainan’ny alarobia 13 septambra, dia nisy farmasia vitsivitsy ao Toamasina no nahatonga cotrim. Mivarotra amin’ny vidiny mahazatra 1 000 Ariary saingy filaharambe kosa vao mahazo ka tsy mahasakana ny varo-maizina any anaty elakelan-trano sy amoron-dalana. Maro araka izany ireo nanararao-pesta. Pesta izay nitondra fahorina ho an’ny havan’ireo namoy ny ainy saingy niteraka bizina kosa ho an’ny mpivaro-panafody sasany.